10 Nwansena funu ma sradehuam a wɔafra no yiye+ bɔn, na ɛsɛe. Saa na nkwaseasɛm kakra nso sɛe onyansafo ne onuonyamfo din.+ 2 Onyansafo koma wɔ ne nifa,+ na ɔkwasea koma wɔ ne benkum.+ 3 Bio nso, ɔkwan biara a ɔkwasea fa so no,+ nyansa bɔ no, na ɔma obiara hu sɛ ɔyɛ ɔkwasea.+ 4 Sɛ ɔhene honhom sɔre tia wo a, mfi wo gyinabea,+ na odwo ma bɔne akɛse ano brɛ ase.+ 5 Mahu adebɔne bi owia ase; ɛte sɛ otumfoɔ+ mfomso:+ 6 Wɔama nkwasea anya dibea akɛse pii,+ na wɔn a wɔfata de, wɔdeda fam koraa. 7 Mahu nkoa a wɔtete apɔnkɔ so bere a adehye nenam fam te sɛ nkoa.+ 8 Nea otu amoa no, ɔno ara na ɔbɛtɔ mu,+ na nea odwiriw abo fasu no, ɔwɔ na ɛbɛka no.+ 9 Nea ɔpae abo no, obepira ne ho, na nea ɔpae nnua no, ehia sɛ ɔhwɛ ne ho yiye.+ 10 Sɛ obi dade ano kum na wansew ano+ a, ɔbɛsɛe n’ahoɔden. Na nyansa nso, sɛ wɔde yɛ adwuma a, mfaso wɔ so.+ 11 Sɛ kaberɛkyerefo kasa kyerɛ ɔwɔ nanso ɔka no+ a, mfaso bi nni n’adɛfɛdɛfɛ no so. 12 Onyansafo anom asɛm yɛ adom,+ na ɔkwasea ano de, ɛbɛmene no.+ 13 Obue n’ano sɛ ɔrekasa a, nkwaseasɛm na ɔde fi ase,+ na abɔdansɛm mu ahuhude na ɔde wie. 14 Ɔkwasea anom nsɛm dɔɔso.+ Obi nnim ɔkyena asɛm; nea ɛbɛba wɔ n’akyi nso, hena na obetumi akyerɛ?+ 15 Nkwasea adwumaden yɛ ɔbrɛgu,+ efisɛ wɔn mu biako mpo nnim ɔkwan a wɔbɛfa so akɔ kurow no mu.+ 16 O asase, sɛ wo hene yɛ abofra+ na wo mmapɔmma fi anɔpa tena aduan ho a, ebesi wo dɛn? 17 O asase, anigye ne wo sɛ wo hene yɛ ɔdehye ba na wo mmapɔmma nso, bere a ɛfata mu na wodidi pɛ ahoɔden, na ɛnyɛ asanom kɛkɛ nti.+ 18 Akwadworɔ bebrebe na ɛma mpuran dwiriw gu, na nsabobɔw na ɛma ɔdan nwini.+ 19 Aduan ma adwumayɛfo serew, na nsã nso ma asetena yɛ dɛ;+ nso sika na wɔde yɛ biribiara.+ 20 Nnome ɔhene+ wo pia mu, na nnome ɔdefo+ bi ɔdan a woda mu mu; efisɛ aboa a otu fa wim de bɛkɔ, na ntakraboa bɛkɔ akɔka asɛm no.+